11-05-2012 03:44 AM #121
2323, AHHA, AungDin, batoe, GuruAM, happyvalley, k-pooh, KM Wai, kokoko123, maintmaintt, mgmgthan, MNO.BN, MrYoDa, orjawlan, RunAtServer, silvia, solidsnake, swarlay, weithet, winhtaytse, yokesoe
04-15-2013 03:20 AM #122
blooom, devilgrin89, dooky, Grace, KM Wai, maykhakhin, mmhtutkhaung, MNO.BN, oowatoke, patriot, PiNyat, RunAtServer, thidar, tiptop, zero6
04-15-2013 06:04 AM #123
batoe, devilgrin89, explorer, Grace, htusitthu, jumaung, ka hta ma, Lynn Eainthu, patriot, PiNyat, RunAtServer, tin122, tiptop, zero6
04-15-2013 06:25 AM #124
devilgrin89, patriot, PiNyat, RunAtServer, systemVI, tiptop, zero6
04-15-2013 12:39 PM #125
The meaning of that statement seem to be the person who love in his or her identity, who proud on the identity which he or she belong and the person who has blinking patriotism in the corner of his or her heart and it's even doesn't mean his or her blood flow with full of patriotism I think.
batoe, KM Wai, RunAtServer, zero6
04-15-2013 01:43 PM #126
tay:u2rsKd;uawmU xm;awmU ..... wcsKdUuqkdaNymao;w,f.... NrefrmNynfNyefNyD; bmvkyfpm;rSmvJ zkHuvnf;wpfxlxl rD;uvnf; rrSef bmrsm;aumif;wm&SdvJ .... qkdwJU tJvkdrsKd;awGvnf; awGzl;ao;w,f..... tJvkdvlrsKd;usawmUNzwfNyD;om &kdufcsifpdwfaygufrdw,f ..... vlwkdif; ukd,fUcH,lcsufeJU ukd,fqkdawmU bmrSraNymcsifygbl; .....wef;wlnDrQ MuKd;pm;cGifUeJU MuD;yGm;cGifUr&EdkifwJU ae&mu aNy;xGufvmMuwmqkdawmU tcGifU ta&;av;&&if aumufaumufygoGm;csifMuwJU olawGrsm;om; .....
'DrSm i,fi,fuwnf;u a&mufaewJU uav;awGuawmU xm;ygawmU olwkdUu [kdrSm o[Zmw NzpfzkdU rvG,fwmukd;....
taMumif;aMumif; aMumifU rNzpfrae aNymif;vdkuf&wJUolawGudkawmU 'DtxJ odrf;MuKH; raNymcsifygbl; ....
batoe, devilgrin89, dooky, explorer, fridayborn, Grace, hellocatcat, hotrod, jumaung, KaungKinPyar, khit, KoSai11, La Goon, LU SHAY, Lynn Eainthu, Ravan, RunAtServer, solidsnake, SuperPooh, sweetee, thidar, Thura Soe, zero6
01-09-2014 09:16 AM #127
august, aura, changralong, DrJones, flintz, galladino, Grace, HlaingKaLayThin, john009, KaungKinPyar, KM Wai, mgknow, MNO.BN, nnnaing, Ravan, softsin, sweetee, thidar, THIHA, tiptop
01-09-2014 11:59 AM #128
taMumif;aMumif; awGaMumifh EdkifiHom; ajymif;vJ cH,lMuwJh udpöeJU ywfowfNyD; &mEIef;jynfh em;vnfEdkifygw,f/ 'gayr,fh olUEdkifiHom; tjzpfoGwfoGif; cH,lyGJ tcrf;tem; wuf&wmudk Edkb,fqk wuf,l&onfhtvm; *kPf,l0rf;ajrmuf ajczsm;axmuf MuwJh udpöudkawmh ckxufxd em;rvnfEdkifao;wm uRefawmfudk,fwkdifu OmPf&nfcsdKUwJhvdkU vdkUyJ r&Jw&J xifrdygw,fAsm../
13713, august, batoe, BH, blooddiamond6, changralong, dooky, DrJones, Grace, HlaingKaLayThin, Incubuz, jim beam, KaungKinPyar, KM Wai, mgknow, MNO.BN, nnnaing, Ravan, solidsnake, thidar, THIHA, tiptop, Warez, xseeker, zoey
03-13-2014 10:55 PM #129
ဒါလေးတွေ့တော့ ဟိုးတလောက ဦးသန့်အကြောင်းဖတ်မိတာလေး သွားသတိရမိတယ်... ဦးသန့်ကို မလေးစားလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်... လောကမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း မဖြစ်ရတဲ့သဘာဝလေးကို စဉ်းစားမိလို့ပါ.... ဦးသန့်အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးတော့ နယူးယောက်မှာ ဆေးကုရင်းဆုံးပါးခဲ့တာပါ... သူ့ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ သူ့စိတ်ဆန္ဒဘယ်လိုပင် ရှိခဲ့စေကာမူ အကြောင်းကြောင်းတွေဆိုတာ ကြုံလာရတာပေါ့.. ပြောချင်တာကတော့ ဘ၀တွေဟာ အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့မှာ မလွယ်ဘူးဆိုတာပါ... မြန်မာပြည်မှာပဲသေရမယ်ဆိုတာ Physically သေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ... Metaphor ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမယ့် တချို့အရမ်းအစွန်းရောက်တဲ့ ကိုမျိုးချစ်၊ မမျိုးချစ်တွေနဲ့ သူတို့နဲ့ ငြင်းကြတဲ့လူတွေ (နိုင်ငံသားပြောင်းသွားကြသူတွေ) ပြောကြရန်ဖြစ်နေကြတာ တွေ့မိတာပါ
ကျမကတော့ အသက်ကြီးလာလေ သူများကို မဝေဖန်ချင်လေဖြစ်လာတော့တာပဲ... သူဘာတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မသိနိုင်ဘူး... သိသည့်တိုင်အောင် ငါသာဆို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မှာပဲဆိုတာမျိုး ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး.... ငယ်ငယ်ကတော့ သူများမဟုတ်တာလုပ်တယ် (သို့မဟုတ်) မလုပ်သင့်တာလုပ်တယ် ထင်ရင် သိပ်စိတ်ဆိုးတာပဲ... လုပ်ရကောင်းလားပေါ့လေ.. ခုတော့လည်း ပါးစပ်ပိတ်ပြီး နေတတ်နေပါပြီ... မြန်မာပြည်အကြောင်း ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောတဲ့သူတွေနဲ့ ကြုံရရင်တော့ နားလည်ပေးလို့ သိပ်မရသေးဘူး... ကိုယ်မကြိုက်ရင် မနေနဲ့ပေါ့.. နှိမ်ပြီး ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောသင့်ဘူးထင်တာပဲ... တခါတလေတော့လည်း အဲဒီလူတွေကို သနားတယ်.. သူတို့အဆင့်အတန်းကို သူတို့ဖော်ပြနေတာကို မသိကြလို့... သူတို့အစား ကိုယ်က မျက်နှာပူနေတယ်... အဲဒီလိုမျိုးကြုံလာရရင်တော့ စကားကို တုံးတိဖြတ်ပြီး အခြားတစ်နေရာကို ထထွက်သွားလိုက်တာပဲ.. ရိုင်းတယ်ထင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး... ရှေ့မှာ အားနာပါးနာထိုင်ပြီး မျက်နှာကြီးစူပုပ်နေရတာထက်စာရင်တော့ တော်သေးတယ်ထင်တာပဲ..
Last edited by Upendi; 03-13-2014 at 11:08 PM.
Alintan, AungNN, batoe, changralong, dogma2, DrJones, Grace, HlaingKaLayThin, JanJan, KaungKinPyar, Khantsoe, Ravan, solidsnake, sunny007, SuperPooh, thidar, tiptop, zoey
01-31-2015 08:23 AM #130
galladino, jsn_woo, koze, MNO.BN, myawlwint, PiNyat, shadow69, solidsnake, thidar, tiptop, zero6